အဆိုပါ NOVA10 ဘောလုံးကိုတက်လျှပ်စစ် & ချစားပွဲပေါ်မှာဝက်အူတယ်, မှန်မှန်နှင့် precision.Z-ဝင်ရိုးတန်းအမြင့် 10 မီလီမီတာဖြစ်ပါသည်, 10 မီလီမီတာအမြင့်ထုတ်ကုန် fit နိုင်ပါတယ်။ အိမ်ရှေ့တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကြာကြာပစ္စည်းများဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။
ယခင်: AEON NOVA14 Laser Engraver & Cutter
နောက်တစ်ခု: AEON MIRA9Laser
လေဆာ Tube: 60W/80W/100W(100W need tube extender)
လေဆာ Tube အမျိုးအစား: CO2 တံဆိပ်ခတ်ဖန်ပြွန်
Z ကိုဝင်ရိုးတန်းအမြင့်: 200mm
input ဗို့အား: 220V AC အ 50Hz / 110V AC အ 60Hz
operating မုဒ်: Optimized raster,vector and combinedmode mode
မက်စအက္ခရာ တင်. မြန်နှုန်း: 1200mm / sec
မြန်နှုန်းဖြတ်တောက်ခြင်း max: 1000mm / sec
acceleration မြန်နှုန်း: 1.8
လေဆာအလင်းထိန်းချုပ်ရေး: ဆော့ဖျဝဲခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထား 0-100%
နိမ့်ဆုံးအက္ခရာ တင်. Size: တရုတ်က Character 2.0mm * 2.0mm, အင်္ဂလိပ်ပေးစာ 1.0mm * 1.0mm
Precision တည်နေရာ: <= 0.1
အထူဖြတ်တောက်ခြင်း: 0-10mm (ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: 0-45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
buffer မှတ်ဉာဏ်: 128Mb
လိုက်ဖက်တဲ့ Software များ: ပန်းထိုး Software ၏ CorelDraw / Photoshop ကို / AutoCAD / အားလုံးသည်မျိုး
လိုက်ဖက်တဲ့စစ်ဆင်ရေးစနစ်: Windows XP / 2000 / Vista, Win7 / 8 // 10, Mac OS နဲ့, Linux,
ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်: Ethernet / USB / WIFI
အေးစနစ်က: water cooling
Air ကို Pump: external 135W Air Pump
အိပ်ဇောဝါသနာရှင်: External 750W blower
စက် Dimension: 1520mm*1295mm*1025mm
စက် Net ကအလေးချိန်: 420Kg
စက် Pack အလေးချိန်: 470Kg
Mini ကိုလေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
© Copyright - 2010-2022 : All Rights Reserved. Friendship link:http://www.aeonlaser.com/ ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - ထုတ်ကုန်များ Featured - Hot Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
CO2 စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း , Reci W2 Laser Cutting Machine, Wedding Card Cnc Cutting Machine, 40w Laser Cutting Engraving Machine, Portable Mini Laser Engraving Machine,